कोरोनाविरुद्धको पहिलो औषधि बनायो भारतले Canada Nepal
कोरोनाविरुद्धको पहिलो औषधि बनायो भारतले
काठमाडौं - भारतमा पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ । यसैबीच भारतले कोरोनाभाइरसविरुद्धको औषधि तयार पारेको बताएको छ ।
भारतले आफुले तयार पारेको कोरोनाविरुद्धको औषधिलाई आज नै सार्वजनिक गर्ने बीबीसीमा जनाइएको छ । कोरोनाविरुद्धको औषधि तयार पार्ने देश भारत पहिलो हो ।
भारतले कोरोनाविरुद्धको यो औषधि भारतको औषधि महानियन्त्रक(डीजीसीआई)ले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो । कोरोनाविरुद्धको २–डीजी नामको औषधि आज भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।
औषधि तयार पारेको बारे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा जनाएका छन् । उनले यो औषधि डीआरडीओको इन्स्टिच्युट अफ न्यूक्लियर मेडिसिन एण्ड अलायर साइन्सेज९इनमास०ले औषधि बनाउने कम्पनी डाक्टर रेड्डीज लेबोरेट्रीजसँग बिलेर तयार पारेको बताएका छन् ।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh will release the first batch of Anti Covid drug 2DG via video conferencing facility tomorrow at 10.30 AM. The drug has been developed by DRDO's Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS) in collaboration with Dr Reddy's Laboratories.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) May 16, 2021
उनले यो औषधिले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीको अक्सिजनमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १२:०७:३६ बजे : प्रकाशित
# कोरोनाविरुद्धको औषधि